Global Voices teny Malagasy » #FreeNganang: Voatazona Ao Amin’ny Fonjan’i Kondengui Ao Yaounde Ilay Kamerone Mpanoratra , Patrice Nganang · Global Voices teny Malagasy » Print
#FreeNganang: Voatazona Ao Amin'ny Fonjan'i Kondengui Ao Yaounde Ilay Kamerone Mpanoratra , Patrice Nganang
Voadika ny 17 Desambra 2017 6:22 GMT 1	 · Mpanoratra Rakotomalala Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Mainty, Etazonia, Kamerona, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Haisoratra, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Patrice Nganang tao amin'ny Tsenaben'ny boky tao Paris, avy tamin'i Georges Seguin CC BY-SA 3.0
Alarobia 6 desambra lasa teo nosamborina tao Douala ilay mpanoratra Patrice Nganang  raha toa ka nizara tao amin'ny Aterineto ny tantara kely mikasika ny dia  nataony tao Kamerona miteny anglisy izy. Mikasika ny toe-draharaha henjana ao amin'ny faritra izay nanambaràn'ny filoha kamerone Biya ny fisian'ny vondrona mpampihorohoro  ilay tantara keliny. 20%-n'ny vahoaka kamerone no miteny anglisy. Nanomboka tamin'ny faran'ny taona 2016 ny krizy tao amin'ny faritra miteny anglisy raha nitaraina momba ny havitsian'ny fisoloana tena ny faritra misy azy any anatin'ireo andrim-panjakana  lehibe ao amin'ny firenena (fianarana, ministera, sns.) ireo mpisolotena ny faritra miteny anglisy. Nihalalina ny krizy taorian'ny fitokonana notarihan'ireo mpisolovava sy mpampianatra miteny anglisy ho an'ny fanajana bebe kokoa ny anglisy any anatin'ny taratasim-panjakana ho toy ny tenim-pirenena ofisialy. Tamin'ny Oktobra 2017, niteraka ny fahafatesan’olona teo amin'ny fito ambin'ny folo teo farafahakeliny  ny fanaparitahana tamin-kerisetra ireo fivorivoriana.
Fantatra noho ny toerany miavaka raisiny mikasika ny lohahevitra maromaro momba ny fiarahamonina ao Kamerona sy Afrika i Patrice Nganang. Nanoratra boky mitondra ny lohateny hoe ”Manohitra an'i Biya” izy noho izany, izay ankaherezany ny tanora ao amin'ny firenena mba ”hampiseho ny maha-olompirenena azy. Tsy mila mampianatra ny fahasahiana an'ireo tanora isika. Efa ananany izany. Tena mahita olona maro loatra aho miditra am-ponja noho ny heviny. Ny fanekena ny jadona, dia midika fialàna andraikitra.” Naka ny toerany ihany koa izy tao anatin'ny zava-mitranga ao amin'ireo firenena afrikana ka gaga noho izany tamin'ny fahitana ireo mpikatroka avy amin'ny fiarahamonin'olontsotra maliana toa i Aminata Traoré milahatra miaraka amin'ireo miaramila mpanongam-panjakana .
Nosamborin'ny polisy tao amin'ny seranam-piaramanidina tao Douala i Patrice Nganang raha toa ka teo am-piakarana fiaramanidina ho an'i Harare, renivohitr'i Zimbabwe. Ny antony iampangana  azy dia: faniratsiràna ny filohan'ny Repobika, fifindràmonina tsy ara-dalàna ary fampiasana sy fanaovana hosoka.
Mirafitra ao amin'ny tambajotra sosialy ny firaisankina amin'ilay mpanoratra-mpikatroka. Nozaraina vondrona mpanoratra iray ny fanangonantsonia  iray natao mba hangatahana ny famotsorana azy avy hatrany. 6992 ireo mpampiasa aterineto efa nanao sonia ilay fanangonantsonia tamin'ny 15 desambra 2017. Natsangana ihany koa ny sehatra fanangonam-bola  mba hanampiana ny fianakaviany hiantoka ny sarany ho an'ny mpisolovava. Mamintina ny zava-nitranga talohan'ny fisamborana ilay mpanoratra ity lahatsary ity:
Mamaritra  an'i Patrice Nganang toy izao ny fanangonantsonia nataon'ilay vondrona mpanoratra:
Mpitsikera henjana sy mahatsiaro tena tsy mba mandohalika, nanangana ny hetsika « Andian-taranaka Fanovana » izy ary efa nandritra ny taona maro no manao asa betsaka, sady eny amin'ny kianja no amin'ny sorany, manameloka ny fihizihiziana, mitsikera ny fahefana mpanao kolikoly. Afaka miantso azy ho adala isika, afaka tsy miombona hevitra aminy fa tena tsy azo ekena ny fanohizana ny fanaovana ny toy izao amin'ireo artista, mpanoratra na ireo hafa koa, izay manatanteraka ny heveriny ho marina, adidy amin'ny maha olom-pirenena ny famoahana ny fireneny hiala amin'ny fahasahiranana misy azy.
Manoratra ity taratasy manaraka ity  ho azy i Boris Bertolt, mpanoratra ao amin'ny Actu Cameroun ary naman'ilay mpanoratra:
Efa ho herinandro izay ianao no nalaina an-kery tamin'ny fomba mampihomehy ary voatazon'ny fitaovana famoretana sy fampijaliana avy amin'ilay fahefana antitra indrindra tsy refesi-mandidy aty Afrika. Rehefa mieritreritra aho isanandro, isanalina momba anao, ny fanaintainanao, ny fijalianao. Tena maharary ahy ny tsy fahafahako manao na inona na inona mba hamoahana anao amin'ny fomba rehetra tsy ho eny an-tànan'ny fahefana tsy refesi-mandidy. Tena mila manam-pahaizana manolo-tena hanompo ny vahoaka, ny voaporitra i Kamerona. Ao Kamerona, ao anatin'izany sokajy izany ianao. Ireo manam-pahaizana mpanavotra. Ireo izay manao sorona ny fotoanany, ny heriny, ny volany, ny fianakaviany, ny zanany mba hananganana ny fiovàna.
Jean-Michel Devésa, mpampianatra ny literatiora frantsay ao amin'ny Oniversite ao Frantsa, dia manoratra taratasy misokatra  ihany koa ho an'ny filoha frantsay Macron:
Tsy manana vaovao mikasika azy mihitsy ny fianakaviany. Tena mampanahy ahy mafy mihitsy ny hanjo ity namana mpiara-miasa ity izay navoakako tamin'ity taona ity ny bokiny. Miangavy anao aho, amin'ny alàlan'ity taratasy ity, mba hanao izay hahazoana antoka fa hanontany amin'ny fomba ara-diplaomatika ny firenentsika, ary araka ny fomba fanao, ny Fiadidiam-pirenena Kamerone mba ahazoana vaovao mikasika an'i Patrice Nganang, mba hahafantarana hoe salama tsara ve izy, ary mba hahafantarana ny toerana itazonana azy raha voatana izy. Miangavy anao ihany koa aho mba hanao izay rehetra vitanao mba hamotsorana an'i Patrice Nganang tsy misy hataka andro, indrindra fa mikitika ny zony fototra ny « fanjavonany » ary raha tsy izay dia ny fanagadrana tsy ara-dalàna azy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/12/17/112066/
 tantara kely mikasika ny dia: http://www.jeuneafrique.com/499512/politique/cameroun-carnet-de-route-de-lecrivain-patrice-nganang-en-zone-dite-anglophone/
 fisian'ny vondrona mpampihorohoro: http://www.jeuneafrique.com/498486/politique/crise-anglophone-au-cameroun-paul-biya-denonce-une-bande-de-terroristes/
 ny havitsian'ny fisoloana tena ny faritra misy azy any anatin'ireo andrim-panjakana: http://www.france24.com/fr/20170518-cameroun-region-anglophone-paul-biya-manifestations-origine-crise
 olona teo amin'ny fito ambin'ny folo teo farafahakeliny: http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/10/03/le-cameroun-anglophone-en-ebullition-compte-ses-morts_5195366_3212.html
 milahatra miaraka amin'ireo miaramila mpanongam-panjakana: http://www.jeuneafrique.com/136553/culture/patrice-nganang-l-homme-r-volt/
 antony iampangana: http://www.jeuneafrique.com/501497/societe/detention-de-patrice-nganang-au-cameroun-on-ne-peut-pas-interdire-a-un-citoyen-davoir-des-opinions/
 sehatra fanangonam-bola: https://www.gofundme.com/free-patrice-nganang-2017
 Manoratra ity taratasy manaraka ity: https://actucameroun.com/2017/12/13/cameroun-lettre-de-boris-bertolt-a-patrice-nganang-patrice-es-moi-individu-a-decide-de-sacrifier-ame-chair-service-de-liberation/
 manoratra taratasy misokatra: https://diacritik.com/2017/12/08/lettre-ouverte-au-president-de-la-republique-sur-la-disparition-de-patrice-nganang-par-jean-michel-devesa/